Keewwatootaaf, akkaataalee dhangeessuu agarsiissa. keewwatoota galmee kee keessaaf akkaataalee keewwataa fayyadamuuf, kuniisi; bocquu, lakkaawwii, fi teessuma dhangeessuutokicha fayyadami.
Arfiiwwaniif, akkaataawwan dhangeessuu mul'isa. Haalata bocquu, keewwata tokko keessaa barruu filatametti fayyadamuudhaaf, akkaataawwamn arfii fayyadami.
Goodayyaawwaniif, akkaataawwan dhangeessuu mul'isa. Teessuma goodayyaa fi qubaannoo dhangeessuudhaaf, haalataawwan goodayyaa fayyadami.
Fuulootaaf, akkaataawwan dhangeessuu mul'isa. , jiraachuu irraantootaa fi jalaantootaa dabalatte teessumawwan fuulaa murteessuudhaaf, haalataawwan fuulaa fayyadami.
Tarreewwan lakkoofseefaman fi raasaaseefaman dhangeessuudhaaf, akkaataawwan dhangeessuu mul'isa. Arfiiwwan lakkoofsa fi raasaasa, akkasuumas galumsawwan ifteessaa dhangeessuudhaaf, haalataawwan tarree fayyadami.
Ajajoota dabalataa waliin baafata xiqqaa tokko bana.
Dhangeessuu keewwata ammaa, fuulaa, yk kutaa irratti hundaa'uun, akkaataa haaraa tokko uuma.
Odeeffannoo dabalataa waa'ee halatootaa.